ကင်မရာ Scanner - Rapid Scanner | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Apps ကပ » ကင်မရာ Scanner, Scan ကိုစာရွက်စာတမ်းများ - Rapid Scanner
ကင်မရာ Scanner, Scan ကိုစာရွက်စာတမ်းများ - Rapid Scanner APK ကို
ကင်မရာ Scanner -
Rapid Scanner သငျသညျစာရွက်စာတမ်းများ, ဓါတ်ပုံများ, အိုင်ဒီကတ်များလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ, ဥပဒေကြမ်းများ, စီးပွားရေးကတ်များ, Whiteboard နှင့်အခြားစာတမ်းများလည်း Scan စာရွက်စာတမ်းများ pdf လုပ် scan ကအသုံးပွုနိုငျကွောငျးစာရွက်စာတမ်းကင်နာ App ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျ JPEG, ဖိုင်တွေသို့မဟုတ်ပါကနေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး app ကိုမှန်ကန်စေသည်ရာ Multi စာမျက်နှာကို PDF အဖြစ်မိုဃ်းတိမ်ကိုပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပင်အီးမေးလ်ကသုံးပြီးစကင်ကို print ထုတ်နိုင်ပါတယ်။main features တွေ: -
ကင်မရာ Scanner: - ဘယ်နေရာမှာမဆို, ဘာမှ၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အဘို့အကင်နာအဖြစ်သင့် Camera ကိုသုံးပါ။
စာရွက်စာတမ်းများ scan: - ဒါဟာမဆိုလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကနေဥပဒေကြမ်းများမှအမျိုးအစားနှင့်ပင်ပေါင်းစုံစာမျက်နှာစာရွက်စာတမ်းဖြစ်နိုင်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ scan ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးစာရွက်စာတမ်းကင်နာ App ဖြစ်ပါတယ်။
multi စာမျက်နှာကို PDF: - အသုံးပြုသူများသည် home page ကိုမှာကို item ပေါ်တွင်ရိုးရှင်းသောရှည်လျား TAP ပေါင်းစုံစာမျက်နှာ pdf ကိုဖန်တီးရန်ရွေးချယ်ရေး mode ကို enable လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်။
စိစစ်မှုများ: - in-built လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ် scan ပြီးနောက်အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန် filter များ။ သငျသညျစကင်ကိုရှင်းလင်းရန် Enhance ထားတဲ့ mode ကို, အရောင်, အရောင် + B ကို / W, B / W + ချောမွေ့, Sharpen နှင့် Grey ကကိုသုံးနိုင်သည်။
ရှာရန်: - စကင်၏နာမတော်အားဖြင့်လျင်မြန်စွာရှာဖွေရေး။
ဝေမျှမယ်: - မျိုးစုံကိုရွေးပြီးစသည်တို့ကိုအီးမေးလ် Dropbox, Google Drive ကို, OneDrive, Evernote ကိုသုံးပြီးဝေမျှ
PDF ဖိုင်မှပို့ကုန်: - ဒီ feature အခမဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ! ယင်း၏အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သငျသညျအခမဲ့န့်အသတ် pdf ဖိုင်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေစာရွက်စာတမ်းများတင်ပို့နိုင်ပါတယ်။
ORGANIZATION: - in-built Scan စာရွက်စာတမ်းများကြည့်ရှုရန်စည်းရုံးရေးမှူး။
features တွေမီးမောင်းထိုးပြ: -
- အစာရှောင်ခြင်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အဘို့အ optimized ။
- စကင်ကိုအမည်ပြောင်း, delete, ဝေမျှဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
- အမည်နှင့်နေ့စွဲဖြင့်မျိုး (ASC / DESC) ။
- Scan စာရွက်စာတမ်းများ၏ pdf စေ။
- A4, ပေးစာ, ဥပဒေရေးရာစက္ကူအရွယ်အစား options များ။
- အလိုအလျောက်နယ်နိမိတ် detect ။
- QR code ကိုစာဖတ်သူ optimized ။
- Cloud Print သုံးပြီးပုံနှိပ်။
- အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အရောင်, မီးခိုးရောင် mode ကိုကဲ့သို့ filter များ။
- လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ scan နဲ့ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများ။
ဘယ်လို scan မှ: -
1 ။ စကင်နာအဖြစ်ကင်မရာကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ပြခန်းထဲကနေရွေးချယ်ပါ။
2 ။ 8 အသုံးပြု. သီးနှံပေါင်းစုံရွေးချယ်ရေး tool ကိုထောက်ပြသည်။
3 ။ filter များလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် image ကို Enhance ။
4 ။ PDF ဖိုင်မှတင်ပို့လျှင်လိုအပ်သည်။
ကင်မရာ Scanner ကသင်အကြိုက်ဆုံး app ကိုဖွစျလိမျ့မညျအားစမ်းကြည့်ပါ။
ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် Libraries များအတွက်လိုင်စင်အသုံးပြုကြသည်။
အဆိုပါ app ထဲတွင်အပိုင်း "အကြောင်း" ကိုစစ်ဆေးပါ။
မှတ်ချက်: - ကျနော်တို့အကြံပြုချက်များမှပွင့်လင်းကြသည်အသုံးပြုသူများပိုမိုပိုကောင်းစေသင့်လျော်သောတုံ့ပြန်ချက်ပေးနိုင်ပါသည်။
* အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က App ကိုအိုင်ကွန်။
အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည် * ဘာဂ်ပြင်ဆင်ခြင်းများ။
ကင်မရာ Scanner, Scan ကိုစာရွက်စာတမ်းများ - Rapid Scanner
10.25 ကို MB
စမတ် Scanner - ...